मोदी सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत – Everest Dainik – News from Nepal
मोदी सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत
नयाँदिल्ली, साउन ५ । नरेन्द्र मोदी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले लोकसभामा पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । शुक्रबार दिनभर छलफल भएपछि अबेर राति भएको मतदानबाट अविश्वासको प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत भएको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा १२६ मत र विपक्षमा ३२५ मत खसेको थियो । ५४५ सदस्यीय लोकसभामा अहिले भएको ५३४ सदस्य रहेका छन् । लोकसभामा बहुमतका लागि २६८ मतको आवश्यकता भएपनि सरकारको पक्षमा ३२५ मत खसेको हो । लोकसभामा अहिले ११ सीट खाली छ ।
सत्तारुद्ध भाजपा एक्लैको २७४ सांसद रहेकाले विपक्षीले विना कुनै उद्देश्य अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन् । ११ घण्टा लामो बहस पछि सरकार विरुद्धको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचन अघि भाजपाको गठबन्धनले फेरि एकपटक बहुमत सिद्ध गर्दै आफू बलियो रहेको पुष्टि गरेको छ । -बीबीसी
ट्याग्स: Indian Pm Modi, narendra Modi
७१ औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आज भारत
अजयको ‘तानाजी’ ले कमायो २ सय करोड, सलमान र रणवीर पछि परे!
पूर्व केही ठाउँमा वर्षा/हिमपातको सम्भावना, कस्तो छ अरू ठाउँमा ?
वुहानका नेपाली विद्यार्थी भन्छन्, ‘बाँच्न गाह्रो भइसक्यो, लौन सरकार उद्धार गर’
ट्याक्टरको ठक्करबाट कञ्चनपुरमा युवकको मृत्यु